ကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတ - မှော်ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်သင်္ကေတများကံကောင်းပါစေဆောင်ကြဉ်း
ကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတ - ဘယ်လိုအစွမ်းထက်နေကြတယ်ရွေးချယ်ဖို့?
သငျသညျအကောင်းကံရဲ့သင်္ကေတကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်လျှင်, ဘဝကိုဖွင့်နိုင်မယ့်အားကောင်းတဲ့နေကြတယ်ရှိသည်ဖို့လိုခငျြပါနဲ့။ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ညွှန်ကြားရပါမည်သည့်စွမ်းအင်ကိုအတူပုံစံမျိုးစုံနှင့်ပုံစံများကိုတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အားရှိပါတယ်။ သငျသညျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။
ပြည်သူ့ရှည်လျားအဆိုးမြင်အတွေးတွေဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပျော်ရွှင်ဖြစ်လာနှင့်အမျိုးမျိုးသောနေကြတယ်သုံး အောင်မြင်မှုကိုဆွဲဆောင် ။ လူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်ကောင်, ကံနှင့်စည်းစိမ်ဆောင်ခဲ့:
acorn - အောင်မြင်မှုဆွဲဆောင်ခွန်အားနှင့်ဖျော်ဖြေဖို့အလိုဆန္ဒပေးသည်။
ပျား - အားလုံးရေးရာအတွက်စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အကောင်းကံကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
လိပ်ပြာ - စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဆွဲဆောင်နှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးသည်။
ကြောင် - ကံကောင်းခြင်း၏သင်္ကေတအဖြစ်ယူဆနေသည်။
ခြေးပိုးထိုး - မြင့်မားအာဏာကောင်းသောကံ, ကြွယ်နှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ကံကောင်းပါစေသင်္ကေတ - Clover
အတော်များများကအပင်လူတစ်ဦးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်စွမ်းအင်ရှိသည်။ four-ရွက် Clover - အိုငျးရစျများအတွက်အမျိုးသားရေးဖြစ်သောကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတ။ လူများတို့သည်သင်သည်ထိုသို့သောအပင်တစ်ပင်ကိုရှာဖွေနိုင်လျှင်, ရှေ့အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုမြျှောလငျ့နိုငျယုံကြည်သည်။ အရွက် Clover mascot ဖွင့်ဖို့, ကခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်သူတို့နှင့်အတူသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ မှော်ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်သင်္ကေတများကံကောင်းပါစေကိုရွှေသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများအနေဖြင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ သင် Clover ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်:
သငျသညျအိမျတျောကိုစွန့်ခွာမတိုင်မီဖိနပ်၏စော်ကားခြင်းကိုအောက်တွင်အရွက်ကိုတင်, ပြီးတော့သင်ကသူ့ဟာသူမှဆွဲနိုင်ပါတယ် စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ။
ကောင်းသောကံနှင့်ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့, သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ Clover လိုအပ်ဝတ်ဆင်။
သင့်အိမ်ကာကွယ်ရန်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းရန်, သငျသညျဖန်အောက်ရှိ Clover ထားအိမ်ရှေ့တံခါးများ၏ရှေ့မှောက်၌ကဆွဲထားရမည်ဖြစ်သည်။
ကံကောင်းပါစေသင်္ကေတ - တကြယ်ပွင့်
ပိုကောင်းဘို့အသင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေရန်, တစ်ဦး mascot ကြယ် ertsgammy အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကောင်းသောကံကိုဆွဲဆောင်အောင်မြင်မှုပေးနဲ့ဒုက္ခဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တတ်နိုင်သည်။ ညာဘက်လမ်းကြောင်းကနေသွေဖည်မည်မဟုတ်သောမသိစိတ်တစ်ပိုင်းလမ်းပြကြယ်ပွင့်များ၏သင်္ကေတထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ဝတ်ထား ကြယ် ertsgammy ဟာအဆောင်လက်ဖွဲ့ဖို့လည်ပင်းအတွက်အကြံပြုသူ၏စိတ်နှလုံးနီးကပ်လာခဲ့သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကိုယ့်ကိုကိုယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကအဖြစ်အပျက်မတိုင်မီရက်အနည်းငယ်ထိုသို့ဝတ်ဆင်ကအပြီးအချိန်အနည်းငယ်ကြာမှအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်မပြုပါနှင့်။
wear စဉ်အတွင်းကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုပါကတစ်ဦး mascot မသုံးစွဲဖို့ပိုကောင်းကြောင်းဖော်ပြသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုဆိုလိုနိုငျကွောငျးအများအပြားထင်မြင်ယူဆရှိပါတယ်:
နက္ခတ်ဗေဒင်ကြယ်၏ 12 မှတ်ရာသီခွင်၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါသင်္ကေတများကောင်းကင်ယံပျံများနှင့်အသင်္ချေအတွင်းကြယ်များ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
လနှင့်နေရောင်၏တန်ဖိုး - Numerologists 12 ယုံကြည်ပါတယ်။ စတား ertsgammy ကောင်းကင်အလောင်းတွေ၏သြဇာအာဏာအရှိဆုံး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှကံကောင်းပါစေကျေးဇူးတင်စကားကိုဆွဲဆောင်။
Esotericism စကြဝဠာ၏ဗဟိုသို့မဟုတ်အသက်အဘို့တာဝန်ယူသောအစွမ်းထက် Chakra အဖြစ်သင်္ကေတထည့်သွင်းစဉ်းစား။
ကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတ - သော့ချက်
အစွမ်းထက်ရှေးခေတ်နေကြတယ်ကောင်းသောကံကိုဆွဲဆောင်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုးမြင်အတွေးတွေဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်။ အသက်တာ၏ဉာဏျပညာနှငျ့အသိပညာရရှိမှုအတွက်အသုံးပြုမှော်အဆောင်လက်ဖွဲ့များ၏ခေတ်သစ်အလေ့အကျင့်၌တည်၏။ ကောင်းသောကံနှင့်စည်းစိမ်သည်များ၏သင်္ကေတကိုအသုံးပြုရန်ဘယ်လိုနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်:
သုံးနှင့်အတူအထုပ်၏ပုံစံအတွက် Mascot ရွှေသော့ချက်, ကျန်းမာရေး၏သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာဓန, ချစ်ခြင်းဖြစ်လေသည်။
ကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတများဖော်ပြ, သီးခြားစီလက်တွေ့ကျတဲ့ Kabbalah အတွက်အသုံးပြုသည်ရှောလမုန်မင်း၏ Key ကိုထွက်ရပ်။ ထိုသို့သော mascot သာမန်လူတို့အဘို့မသင့်တော်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သာမှော်လက်ဆောင်တစ်ခု၏ရှေ့တော်၌ဝတ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်။
ဒါဟာကောင်းသောကံကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အဆိုးမြင်အတွေးတွေဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်မည်သည့်တစ်ဦး mascot အဖြစ်သော့တစည်းဆွဲထားဖို့ထင်ရှားတဲ့နေရာ, တစ်အိမျ၌ရှိနိုင်ပါသည်။
ကံကောင်းပါစေသင်္ကေတ - မြင်း
Noble တိရိစ္ဆာန်အလုပ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုဆွဲဆောင်မည့် Feng Shui အတွက်နေကြတယ်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ သူတို့ရဲ့ဓိပ်ပာယျနှငျ့မြင်းအတော်ကြာမျိုးရှိပါတယ်:
Bareback နှင့် galloping တိရိစ္ဆာန် - ပြိုင်ဘက်အပေါ်အောင်ပွဲသင်္ကေတဖြစ်သောကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတ။ ဒါဟာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, စီးပွားရေးနှင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးမြင်း၏ရုပ်တုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။
ရတနာတို့ကဝိုင်းရံမြင်း, လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားနှင့်ကြီးထွားလာအရေးပါမှုတိုးတက်လာဖို့, ကောင်းသောကံကိုဆွဲဆောင်လေ့ရှိတယ်။
ရလဒ်ပေးရကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတ, ကမှန်ကန်စွာအိမ်တော်ရုပ်တုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံနေရာချရန်လိုအပ်ပေသည်။ မြင်းတောင်ဘက်-အနောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင်ထားရှိရပါမည်။ ဒါဟာကိန်းဂဏန်းပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ်တံခါးကိုဖို့ညွှန်ကြားမခံခဲ့ရအရေးကြီးပါသည်။ Feng Shui အိပ်ခန်းပုံရိပ်ထဲမှာမြင်းထားရန်အကြံပြုမထားဘူး။ အလုပ်အတွက်အောင်မြင်မှုရရန်, သင့် Desktop ပေါ်မှာမြင်း၏ပုံကိုတင်ထားရမည်။
ကောင်းသောကံ၏သင်္ကေတ - တစ်မြင်းခွာ
ကောင်းသောကံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးဇာတ်ကောင်တစ်ခုမှာတစ်မြင်းခွာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခတျေကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထို့နောက်သူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌အောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ, လမ်းပေါ်မှာထိုသို့သောအမှုကိုအတွေ့လျှင်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုယ်နှိုက်ကခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်းသကဲ့သို့, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌မြင်းချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏ပြယုဂ်အဖြစ်မှတ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်္ကေတပျော်ရွှင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုသတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာအရပြုလုပ်တံခါးကိုကျော်တစ်မြင်းခွာထားရန်လိုအပ်ပေသည်။
အရှေ့မှာတော့လက်တင်အမေရိကနှင့်ပျော်ရွှင်မှု ergot ဆင်းနေတဲ့မြင်းခွာဦးချိုနေရာလက်ခံသည်အများအပြားဥရောပနိုင်ငံများတွင်အိမျသို့စီး။
လူတစ်ဦးချင်းစီအိမ်တော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်အောင်ကောင်းသောကံမြင်းခွာ၏သင်္ကေတသူမ၏ထိမိ, အီတလီအတွက်ဆွဲထားကြ၏။ မက္ကစီကိုဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမနေတဲ့ကံဇာတာကိုခိုးယူဖို့မသကဲ့သို့, ထိ, ဒါကြောင့်မြင့်မားသောကြောင့်ဆွဲထား, ဖဲကြိုးနှင့်ဒင်္ဂါးပြားတွေနဲ့အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
များစွာသောလူမျိုး, အသင်းအဖွဲ့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအောင်မြင်မှုဆောင်ကြဉ်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ဘို့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့်အားကောင်းတဲ့စွမ်းအင်ရှိသည်သောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ Charm, ရှိသည်။ ငွေကြေးနှင့်အကောင်းကံကိုဆွဲဆောင်လူသိများသင်္ကေတများ:
အာဖရိက - မိကျောင်းအံသွား;
အာရှတိုက်မှာ - ဝါးနှင့်ပုရစ်;
အင်ဒီးယန်း - ကချင် (အထူးရုပ်);
အဲဂုတ္တုပြည်၌ - scarab ။
ကောင်းသောကံ၏ Slavic သင်္ကေတ
ရှေးဟောငျးအီဟာဆလဗ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအဘို့မိမိတို့လူကြိုက်များဆုံးရှုံးမထားတဲ့ထုတ်လုပ်အမျိုးမျိုးသောအဆောင်လက်ဖွဲ့, ပိုင်ဆိုင်တယ်။ အစွမ်းထက်သင်္ကေတသည်, ခါးပတ်မှလက်ကောက်လျှောက်ထားသင်းကျစ်, ပင်ထိုမှပါးတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ဇွန်းသို့မဟုတ်နံရံများပေါ်တွင်အဝတ်နှင့်ပုံဆွဲပေါ်ပန်းထိုးအထည်များကိုဖန်ဆင်းကောင်းသောကံနှင့်စည်းစိမ်၏ Slavic သင်္ကေတ။ လူကြိုက်အများဆုံးပုဟာဆလဗ်ကြားတွင်ကောင်းသောကံနှင့်စည်းစိမ်၏အောက်ပါသင်္ကေတများပါဝင်သည်:
Kolyada ။ သူတို့ဘဝအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အတှကျအအပြောင်းအလဲများကိုဆောင်ကြဉ်းရန်ဤသင်္ကေတကိုသုံးပါ။
Svadebnik ။ ဤသည်မှာသင်္ကေတသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ၌ကောင်းသောကံကိုဆွဲဆောင်ဖို့အသုံးပြုသည်။ လူငယ်တွေကသင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖွေပါကအသုံးပြုပါ။ ဇာတ်ကောင်တရံရှိလူများအဘို့အဆက်ဆံမှုအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ခံစားချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
Alatyr ။ တင်ပြနိမိတ်လက္ခဏာပစ္စည်းကောင်းသောကံနှင့်စည်းစိမ်ကိုဆွဲဆောင်။
သင်၏အသက်တာသို့အောင်မြင်မှုဆွဲဆောင်ဖို့ဂျပန်လူများတို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာ syncretism ၏ဘုရားခုနစ်ရုပ်ပွားတော်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့တစ်ဦးစီသည်သူ၏နယ်ပယ်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်နှင့်လူကြိုက်အများဆုံးကအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်:
Daikokuten ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ကြွယ်ဝမှု၏ဤဘုရားကာကွယ်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်စေ့စပ်ထားသူလူတို့အားအထူးသဖြင့်ထောက်ခံသူ။ သည်းခံခြင်း, ပညာနှင့်ဆန် (စည်းစိမ်ဥစ္စာ) ဖြစ်သောသူမ၏ပိုက်ဆံအိတ်, နောက်ကွယ်မှဤသည်ဘုရား။ ကောင်းသောကံများနှင့်အောင်မြင်မှုသင်္ကေတ, သီးခြားစီကိုအသုံးပြုနိုင်သည့် - မိမိလက်ျာလက်၌တစ်ဦးမှော်တူခဲ့ပါတယ်။
Fukurokudzyu ။ အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်မလုပ်တတ်နိုင်သောဤသည်တရုတ်ရသေ့။ သူကကမ္ဘာ၏ဉာဏျပညာနှငျ့ရေးထိုးသည်စာလိပ်ကိုကိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောကံကိုဆွဲဆောင်နှင့်မိသားစုမှပျော်ရွှင်မှုကိုပေးပါ။
အတော်များများက mascots Feng Shui ၏လူကြိုက်များသွန်သင်ချက်တွေကိုအားဖြင့်ငါတို့အားလူသိများကြသည်, တရုတ်အတွက်လူကြိုက်များကြသည်။
နဂါး။ ကောင်းသောကံကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးသောအမျိုးသားသင်္ကေတ, တစျခု။ ကအရှေ့သို့မဟုတ်အရှေ့တောင်ဘက်ရန်အကြံပြုသည်ချထားပါ။ သင်သည်သင်၏နဂါးအလိုဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းချင်လျှင်, အဘယ်သူ၏နှုတ်သည်ပုလဲတစ်နဂါး, ဖြစ်လာရန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
သုံးခြေထောက်နှင့်အတူဘားပြုပ်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပေါ်ပြူလာဖြစ်သောကောင်းသောကံများနှင့်အောင်မြင်မှု၏လူသိတရုတ်သင်္ကေတ။ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဆွဲဆောင်ဖို့နှုတ်၌အကြွေစေ့နဲ့ရွှေဘားပြုပ်၏ပုံစံအတွက် Statuette ။ အရှေ့တောင်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရှေ့တံခါးအနီးတွင်အကောင်းဆုံးကထားပါ။
ရွှေငါး။ သငျသညျကံ, ဒါပေမယ့်လည်းမိသားစုသက်သာချောင်ချိရေးကိုသာဆွဲဆောင်တံ့သော, ထိုငါးမွေးကန်များတွင်ရုပ်ပွားတော်ပေမယ့်အသက်ရှင်ငါးမသာကိုသုံးနိုင်သည်။ - အနက်ရောင်ရှစ်ရွှေ, သို့မဟုတ်အနီရောင်နှင့်တဦးတည်း: သင်ရုံကိုးငါးကိုဝယ်လျှင် သာ. ကောင်း၏။
အတော်များများအံ့အားသင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့ကောင်းသောကံ၏အဓိကသင်္ကေတတွေထဲကကွေးကြီးစွန်းတိုင်အောင်သို့မဟုတ်တန်ပြန်လက်ယာရစ်နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်သော swastika ဖြစ်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်သည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအသက်, မွေးဖွားနှင့်အလင်း၏သင်္ကေတအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ကောင်းသောကံဆောင်ခဲ့သင်္ကေတ, အားလုံးအိန္ဒိယကျော်ပြန့်နှံ့အများအပြားဘုရားကျောင်း, ကျောက်ဆောင်နှင့်အထိမ်းအမှတ၏နံရံပေါ်မှာထွင်းထုထားသည်။
Achilles '' ဖနောင့် - Achilles ၏ရှေးဟောင်းဂရိဒဏ္ဍာရီ
Citrine - မှော်ဂုဏ်သတ္တိများ
Phantom - ကဘာလဲနှင့်မည်သို့ခေါ်ပါသလော
အလတ်စား - သူသည်နှင့်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို?
မာယာယဉ်ကျေးမှု - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမြိုး၏တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်၎င်း၏အောင်မြင်မှုများ
အမြိုးသမီးမြားနှငျ့အမြိုးသမီး၏တနျခိုးဘို့ Sufism နှင့်ဆူဖီအလေ့အကျင့်
Orpheus နှင့် Eurydice - သူတို့ကဒဏ္ဍာရီ၌နေသော?
ဆဲလ်တစ်လက်ဝါးကပ်တိုင် - တန်ဖိုးကို
Nacho - ကြော်
စုစုပေါင်းထိတွေ့: အသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ Doubles အစုံပေါ်
ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်းဘာလုပ်ချင်ကြပါဘူး - စိတ်ပညာရှင်
Chloe Morets သင်္ကေတများနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုလက်စွပ်ဝတ်ဆင်စွန့်ပစ်
ရိုးရာကုစား၏အူလမ်းကြောင်း colitis ကုသမှု
ပိုကောင်းဘာလဲ - ဖရဲသီးသို့မဟုတ်ဖရဲသီး?
ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက် Reishi မှိုယူနည်း
Black ကချွေးထွက် - ဘာဗီရို၏ဖက်ရှင်ဒြပ်စင်ဝတ်ဆင်နည်း